सङ्क्रमणदर बढेसँगै काभ्रेमा आइसोलेशन सङ्ख्या बढाइँदै - Sunaulo Nepal
बिहिवार, बैशाख २३ गते २०७८
बैशाख २१, २०७८ मंगलवार १०:०० बजे
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमण १०६ मा पुष्टि भयो । अघिल्लो दिन ४१ सङ्क्रमित थिए । तथ्याङ्कअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा शनिबार ९७ र शुक्रबार ६९ थपिए भने बिहीबार ४५ मा कोरोना सङ्क्रमण देखियो ।
हालसम्म जिल्लाका ५० कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको जिल्लास्थित कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी केन्द्र ९डिसीसीएमसी०ले जनाएको छ । सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएकाले दिनानुदिन सङ्ख्या बढ्ने आँकलन गरिएको केन्द्र सदस्यसचिव एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नरेन्द्र झाले बताए । 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ', उनले भने । केही दिनदेखि सङ्क्रमणदर दोब्बर हुँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख शहरलगायत दुई राष्ट्रिय राजमार्गमा सिमाङ्कन गरी सोमबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सरकारको कोरोना ‘रेड जोन’का २२ जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक पनि हो ।
यसैबीच कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दै गएपछि जिल्लाको चार स्थानीय तहले अक्सिजनसहितको आइसोलेशन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । १३ तहमध्ये बाँकी तहले पनि आइसोलेशन व्यवस्थित गर्दैछन् । केन्द्रले हप्ताअघि सबै तहलाई अक्सिजनको थप सुविधासहित आइसोलेशनलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्न आग्रह गरे पनि कसैले चासो दिएका थिएनन् । केही दिनदेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि पाँचखाल नगरले गत शुक्रबार १५, बनेपा नगरले आइतबार ५० तथा नमोबुद्ध नगर र रोशी गाउँपालिकाले सोमबारदेखि संयुक्तरूपमा पछि २५ शय्या थप्ने गरी नमोबुद्धको भकुण्डेमा २५ शय्याको आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
बनेपाले भने ५० मध्ये चार शय्यामा मात्रै हाल अक्सिजन सेवा उपलब्ध गराइएको नगर उपप्रमुख रेखा दाहालले जानकारी दिए । पनौती र धुलिखेल नगरमा केही दिनभित्रै आइसोलेशन सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको छ । दोस्रो लहरको सङ्क्रमणको तीन साता बितिसक्दा काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि नौ स्थानीय तहले आइसोलेशन व्यवस्थापनमा आलटाल गरिरहेको देखिन्छ । बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले भने हप्ताअघि नै आइसोलेशन व्यवस्थित गरी सेवा दिइरहेका छन् ।
सम्भावित जोखिमलाई मध्यजर गर्दै आइसोलेशन व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सङ्क्रमित सङ्ख्या न्यून रहेको जनाउँदै आठ तहले बेवास्ता गरेका छन् । 'दुई जना त सङ्क्रमित छन्, आइसोलेशन बनाउँदै जाउँला नि', खोनीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खुलालले भने। गत वर्ष काभ्रेपलाञ्चोकका सबै स्थानीय तह सबैले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिन निर्माण गरेका थिए । बनेपा र धुलिखेल नगरले ५० शय्या, पाँचखालले सात, पनौतीले छ र नमोबुद्ध नगरले छ शय्याको आइसोलेशन कक्ष व्यवस्थित गरेका थिए ।
थप गरिएको निषेधाज्ञामा सवारी पास सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था
५८ जना काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु, थप ८६५९ जनामा संक्रमण पुष्टि
कोभिड संक्रमणबाट नागरिक जोगिने गरि काम अघि बढाउन सरकारसँग फेकाेफनकाे अपिल
एनआईसी एसिया बैंककाे चर्काे ब्याजदर : घरकर्जा १६ प्रतिशतसम्म !
देउवा भेट्न प्रधानमन्त्री ओली बूढानीलकण्ठ
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा थप एक अध्यादेश जारी
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा रामबहादुर थापासँग विपक्षी गठबन्धनले देवकोटा भिडाउने
झाँक्रीकाे चेतावनी : हामी डुब्दा तिमिलाई पनि लिएर डुब्छाैँ
गण्डकी प्रदेश : संकटमा जनमोर्चाका सांसद, केन्द्रको आदेश मान्ने कि कार्यकर्ताको चेतावनी सुन्ने !
स्याङ्जामा कांग्रेसका एक सय भन्दा बढी कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई डा. रवीन्द्र पाण्डेकाे अनुरोध
कुहिएकाे कुखुराको 'फ्राइड चिकेन' बेचेपछि...(भिडियाे रिपाेर्ट)
काेराेना संक्रमित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दम्पती अस्पताल भर्ना